Madaxweyne Shariif oo booqday farumaha hore ee dagaalka (Sawiro) | raascasayrmedia.com
← Ciidamada DKMG iyo Ahlu Suna oo Si Rasmi ah ula Wareegay Degmada Garbahaarey
Barcelone oo ku tumatay Real Madrid Cayaarti Champion League -ga →
April 28, 2011 · 5:07 pm
Madaxweyne Shariif oo booqday farumaha hore ee dagaalka (Sawiro)
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya ayaa maanta booqday furumaha hore ee dagaalka ee wadada Warshadaha isagoo kulyada Jaalle Siyaad kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan AMISOM.
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay booqdeen farumaha hore ee dagaalka gaar ahaan kuwa kuyaala wadada warshadaha ee Magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku suganyihiin ciidamada dowladda KMG oo gacan ka helaya kuwa AMISOM.
Shariif Sheekh Axmed ayaa booqashadiisa waxaa ku wehliyay wasiiro dowlaha wasaarada Gaashaandhiga, Wasiir ku xigeenka arimaha gudaha iyo amniga Qaranka, taliyaha ciidanka xooga iyo abaanduulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadal kooban ka jeediyay xarunta wasaarada Gaashaandhiga ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xooga dalka Soomaaliya ay gaareen guulo la taaban karo, isagoo hoosta ka xariiqay in guushaasi ay tahay mid u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu shacabka ka codsaday in ay bar bar istaagaan dowladda KMG Soomaaliya.
Sheekh shariif Sheekh Axmed ayaa intaasi waxa uu raaciyay in haatan ay wiiqantay awoodii militari ee AL Shabaab, wuxuuna sheegay in ciidamada xooga ay ka go’antahay in goordhow ay soo afjaraan dagaalada ay kula jiraan Al Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale waxa uu booqday kulyada ciidamada ee Jaalle Siyaad halkaasi oo uu kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM iyadoo kulankaasi oo saacado badan qaatay ay saxaafadu dibad joog ka aheeyd.
Kulanka ay wada qaateen Sheekh Shariif iyo saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa si dhab ah aan loo ogeyn waxyaabihii ay uga hadleen.